ပင်ပန်းနေအုန်းမယ် - Owl Myanmar News
OM | May 14, 2021 | Uncategorized | No Comments
ဒါ .. မဝင်းမေတို့အိမ်ပါလားခင်ဗျာ”” ““ဟုတ်ပါတယ် . ဟုတ်ပါတယ် .. ဘာကိစ္စရှိလို့ ပါလဲ”” ““မဝင်းမေ ကျွန်တော့်ကိုသိပါတယ် .. ခဏလောက် ခေါ်ပေးပါလားဗျာ”” ““မဝင်းမေ ခရီးထွက်နေတယ်ကွဲ့”” ““ကျွန်တော်က ဦးနေစိုးသား ဇေယျာစိုးပါ။ ဒီမှာငွေကြေးစာရင်းလေးတွေရှင်းဖို့ ဖေဖေလွှတ်လိုက်တာပါ”” ဒီတော့မှ အသက်(၅၀)လောက်ရှိသော ဦးလေးကြီးသည် လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်၍ သွားရလေသည်။ ““အော် .. ဦးနေစိုးရဲ့သားကိုး .. လာလာ အိမ် ထဲဝင် ဦးလေးတို့ကလဲ လူစိမ်းဆိုတော့ ရုတ်တရက် အဝင် မခံရဲဘူးကွဲ့ .. ဟဲ့ သမီးခင်မေ ဧည့်သည် အတွက် ရေနွေး နဲ့အမဲခြောက်ဖုတ်လုပ်ပါကွဲ့”” ““ရပါတယ် ဦးလေးရာ ကျွန်တော့်အတွက် ဒုက္ခမရှာပါနဲ့”” ““ဒါနဲ့ ဘယ်မှာတည်းလဲကွဲ့”” ““မတည်းရသေးပါဘူး ကျွန်တော်ခုမှရောက်တာ”” ““ဟေ့ .. ဒါဆို ဒို့အိမ်မှာဘဲနေ အိမ်ကလဲကျယ် တယ်။ မင်းစိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ်နေလို့ရပါတယ်။ တခြား သွားမတည်းရဘူးနော်”” ““ဟာ .. မဟုတ်တာ အားနာစရာကြီး ကျွန်တော်အပြင်မှာဘဲ တည်းပါရစေ”” ““ဒီမှာ မင်းအဖေနဲ့ ကျုပ်နဲ့က အင်မတန်ရင်းနှီး တာကလား ဒီတော့ မင်းက ကျုပ်စိတ်မကောင်းအောင် တော့မလုပ်ပါနဲ့ကွယ် မင်းအဖေရဲ့ ကျေးဇူးတွေကလဲ ဒို့အပေါ်မှာ အများကြီးရှိတယ်။ ကြုံကြိုက်တုံး ပြုစုပါရစေ ကွယ်”” ““ကောင်းပါပြီ ခင်ဗျာ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် တော့ ဘာမှ ထူးထူးထွေထွေတွေ မလုပ်နဲ့နော်”” အဖိုးကြီးနှင့် ဇေယျာစိုးတို့ စကားပြောနေကြစဉ်မှာပင် အသားလတ်လတ် လူလုံးတောင့်တောင့်အသက် (၁၆)နှစ်လောက်ရှိသော ကောင်မလေးတစ်ယောက် လင်ဗန်းထဲတွင် လဘက်ရည်ခရားနှင့် စားစရာများ ထည့်ပြီး လက်မှကိုင်ကာ အဖိုးကြီးရှေ့မှ ယို့ယို့လေးဖြတ်၍ လျှောက်လာသည်။
ပြီးတော့ ဇေယျာစိုး၏ ရှေ့တွင် စားစရာများ ချ၍ ပေးလိုက်သည်။ အဖိုးကြီးကတပြုံးပြုံးဖြင့် ကြည့်နေယင်း .. ““ဒါ မဝင်းမေရဲ့ညီမ ခင်မေဘဲကွဲ့ မှတ်ထား ဒါ ညီးအကိုလိုသဘောထား တို့ဖေါက်သယ် ဦးနေစိုးရဲ့ သား ဇေယျာစိုးတဲ့ နင့်အမ မလာမချင်း ဒို့အိမ်မှာနေမှာ အစစ ဂရုစိုက်နော် ကလေး”” ကောင်မလေးက ဇေယျာစိုးကို မရဲတရဲကြည့်ရင်း ခေါင်းငြိမ့်၍ပြသည်။ ပြီးသည်နှင့် ချာကနဲလှည့်ထွက်သွား တော့သည်။ ဇေယျာစိုးက ခင်မေ၏ နောက်ပိုင်းကို အသာခိုး၍ ကြည့်သည်။ လုံးကျစ်နေသော တင်သားလေးတွေက မလှုပ် ချင်လှုပ်ချင်နဲ့ ခါသွားတာတွေ့လိုက်ရသည့်အတွက် ဇေယျာ စိုး၏ စိတ်ထဲ မကြေမချမ်းလေးဖြစ်သွားရသည်။ ““မဝင်းမေကတော့ ကြာလိမ့်မယ်ကွဲ့ အနဲဆုံး တပတ်လောက်ကြာမယ်”” ““ဘယ်ကိုသွားတာလဲ ဦးလေး .. ဒီလောက်တောင်ကြာရအောင်”” ““လိမ္မော်စိုက်ခင်းတွေ လိုက်ကြည့်နေတာကွဲ့ .. ခြံတွေအသစ်တိုးထားတာရှိတယ်လေ။ အဒေါ်နဲ့ သွားဆိုလဲ မရဘူးကွယ်။ ပညာလေးက တတ်တော့ မိဘကိုတောင် မရို သေချင်ဘူး။ အသက်ကလဲ အစိတ်ရှိနေပြီ အိမ်ထောင်ပြု ပါလို့ပြောလို့လဲ မရ။ ကျုပ်က စိတ်မချနိုင်ဖြစ်နေတာ။ ခက်ပါ တယ်ကွယ်”” ““ဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်မလဲ ဦးလေးရာ သူလွတ်လွတ် လပ်လပ်နေချင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့”” ““အငယ်မ ခင်မေကျတော့လဲ တမျိုးကွဲ့ သူ့အမလို ထက်ထက်မြက်မြက်တော့မရှိဘူး အိမ်ထဲမှာဘဲ ကုတ်နေ တယ်။ ကျောင်းနဲ့ အိမ်နဲ့ဘဲ အခု (၉)တန်းအောင်ထားပြီလေ”” ““ဦးလေး ဒါနဲ့ မဝင်းမေဆီ ကျွန်တော် လိုက်သွားလို့မရဘူးလား စိုက်ခင်းတွေလဲ ကြည့်ရင်းပေါ့ ..”” ““မလွယ်ဘူးကွဲ့ ခရီးက သိပ်ကြမ်းတယ် မြင်းရော စီးတတ်လား”” ““နဲနဲပါးပါးတော့ စီးတတ်ပါတယ် ဦးလေးရ”” ““အေး ဒီခရီးက မြင်းနဲ့သွားရမှာ ဒီကနေ ကားတတန် ခြေကျင်တတန်နဲ့ နောက်ဆုံး မြင်းနဲ့ခရီးဆက်မှ ရောက်မှာ..”” ““ရပါတယ် ဦးလေးရာ မဝင်းမေလို မိန်းခလေးတောင် သွားနိုင်တာဘဲ နောက်ပြီး ဗဟုသုတလဲရတာပေါ့ ဒီလိုကြီးတော့ ထိုင်စောင့်မနေချင်ဘူး”” ““အေး ဒါဆိုလဲ ခင်မေကို လမ်းပြခိုင်းမယ် သတိနဲ့ သွားကြပေါ့ ကျုပ်က ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းလို့ နို့မို့ယင် လိုက်ပို့ပါတယ် ကွယ် မနက်ဖန် မနက် စထွက်ကြပေါ့”” ““ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေး . ခရီးတလျှောက်လုံးချောချောမောမော ရှိခဲ့ရသည်။ သို့ရာတွင် မြင်းငှားသောနေရာရောက်တော့ ပထမဆုံး အ ဆင်မပြေမှုဖြင့် ဆုံဆည်းရသည်။ ငှားမဲ့မြင်းက တကောင် သာရှိသည်။
ဇေယျာစိုးက ခင်မေကို တယောက်တလဲစီးဖို့ ပြောတော့ သူက ခေါင်းငြိမ့်ရှာသည်။ မြင်းငှားသောနေရာမှာပင် ရေမိုးချိုး၍ စားသောက်ပြီး ခရီးထောက်နားလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ ခရီးဆက်၍ထွက်ရန် ပြင်တော့သည်။ ခင်မေက စောစောတုံးကလို ထဘီတိုတိုဖြင့်မဟုတ်တော့ဘဲ စကပ်နီညိုလေးကို ဝတ်၍ထားသည်မှာ အတော်ပင် ကြည့်လို့ကောင်းလှသည်။ မြင်းနဲ့ထွက်လာပြီး တနာရီလောက်လဲ လမ်းလျှောက် လိုက်ရော ဇေယျာစိုးတစ်ယောက် အကျင့်မရှိ၍ အတော်ပင် မော၍လာသည်။ ဒါကိုသိသော ခင်မေက မြင်း ပေါ်မှဆင်းပေးပေမဲ့ သူမကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းပြီး မြင်းပေါ်ကို ဇေယျာစိုးက တက်စီးရန်ကိုတော့ ဇေယျာစိုးက မစီးရက် ဖြစ်နေရသည်။ သူစီး ငါစီးဖြင့် နောက်ဆုံး နှစ်ယောက်စလုံး စီးဖြစ်သွားကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူမို့ ခင်မေက ရှေ့စီးသည်။ ခရီးက တ ဖြေးဖြေးဖြင့် ကြမ်း၍လာသည်။ သစ်ပင်တွေကအုပ်ဆိုင်း၍ နေပြီးလူသွားလူလာလဲမရှိပေ။ ““လမ်းက အရမ်းလူရှင်းတယ်နော်”” ““ဒါဖြတ်လမ်းအကိုရဲ့ လမ်းကြမ်းတယ်။ လူတွေက လမ်းကောင်းဘဲသွားတာများတယ်။”” မြင်းကဘာစိတ်ကူးပေါက်သည်မသိ ပုံမှန်ပြေးနေရာမှ ကဆုန်ချ၍ပေးတော့သည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသော ဇေယျာစိုးက အထိတ်တ လန့်ဖြင့် ခင်မေ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်၍ထားသည်။ အတန်ကြာလို့ မြင်းကမောပြီး ရပ်သွားသည့်တိုင်အောင် ဇေယျာစိုးက သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဇေယျာစိုးက သတိမထားမိဘဲ ဆက်လက်၍ ဖက် ထားတာဖြစ်ပြီး အဖက်ခံထားရသော ကောင်မလေးကတော့ ဇေယျာစိုး၏ လက်တွေကို အောက်သို့တွန်း၍ ချပေးသည်။ သည်လိုမလုပ်၍လဲမဖြစ်ချေ။ ဇေယျာစိုး၏ လက်တွေက သူမ၏ နို့အုံတွေပေါ်တွင် ဖိ၍ထားသည်။ မြင်းနှင့်ဆက်ပြီး ခရီးနှင်လာသော်လဲ တချက်တချက် ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဇေယျာစိုး၏ လက်တွေက သူမ၏ နို့တွေကို သွား၍ သွား၍ ထိမိသည်။ ဇေယျာစိုးသည် သာယာ သလိုဖြစ်မိခြင်းကြောင့်လက်ကို မဖယ်တော့ဘဲ အသာလေး နို့ပေါ်တင်ထားလိုက်သည်။ ကောင်မလေးကလဲ ဖယ်မချ တော့ချေ။ ဇေယျာစိုးက အားတက်လာပြီး အင်းကျီပါးပါးလေးပေါ်က မြင်နေရသော ဘောလီလေးကိုဘဲ အားမလိုအားမရဖြင့် မသိမသာလေး ပွတ်၍ပေးနေသည်။ မသိမသာဆိုပေမဲ့ ကောင်မလေးကတော့ သိပုံရ သည်။ အသံကတော့ တချက်မှ မထွက်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဇေယျာစိုးက ရဲရဲတင်းတင်းဖြင့် နို့အုံလေးကို လက်ဝါးနဲ့အုပ် ပြီး ညှပ်ပေးသောအခါ ကောင်မလေးက တခါနှစ်ခါတော့ ဖယ်၍ချသည်။ နောက်တော့ ကိုင်ခွင့်ပြုထားလိုက်သည်။ ဇေယျာစိုးက ခဏကြာ စိတ်တိုင်းကျ ဖျစ်ညှစ်ပေး ပြီးတော့မှ သူမ၏ အင်းကျီအရှေ့ ကျယ်သီးများကို ဖြုတ်၍ ချလိုက်တော့သည်။ အင်းကျီရင်ဘတ်ပွင့်သွားသည့်အတွက် ကောင်မလေး၏ ပုခုံးသားလတ်လတ်လေးများသည် စောလျှင်စွာ ထွက်ပေါ်၍လာသည်။ ဇေယျာစိုးက လက်တဖက်ဖြင့် သူမ၏ခါးကို ဖက် လျှက် ကျန်လက်တဖက်ဖြင့် နောက်ကနေ အင်းကျီကို လှန် ပြီး ဘော်လီအင်းကျီချိတ်ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်သည်။
ဒီအခါတွင်တော့ ခင်မေသည် တုန်တုန်ရီရီလေး ဖြင့်ဘော်လီကို ချွတ်ရာမှာ လက်လေးနှစ်ဖက်ကို တဖက်စီ မြှောက် ပေးတာတို့ ချိတ်ဖြုတ်ပေးတာတို့ဖြင့် ကူညီရှာသည်။ ဟင်းလင်းပွင့်သွားသည်နှင့် သူမရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ လျှောက်ပွတ်ရင်း နို့ကို ထိကိုင်မိတာနဲ့ ဂရုတစိုက်ညင်သာစွာ နယ်ပေးလိုက်သည်။ အပျိုစင် အပျိုရိုင်းလေးမို့ ဆိုရမလား။ အခုမှ အပျိုဖေါ်ဝင်စဆိုတော့ တင်းပြီး ရှေ့သို့ချွန်ထွက်ကာ အခွံမနွှာ ရသေးတဲ့ ကွမ်းသီးတစ်လုံးစာလောက်တော့ရှိသည်။ အပျိုကြီးတွေရဲ့ နို့နဲ့မတူဘဲ တကယ့်ကို လတ်ဆတ် သည်။ အရသာပင် ပျော့အိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ နို့ကို ဆုတ်ရင်းဖြင့် နောက်ကနေဂုတ်ကို နမ်းစုတ်ပေးပါသည်။ ဇေယျာ စိုးသည် သူမ၏ ဂုတ်တွင်သာမက လက်ပြင်တွေ သွေးချေဥအောင်ပင် နမ်းစုပ်ပေးမိသည်။ ခင်မေကတော့ မြင်းဇက်ကြိုးကို နိုင်အောင် မကိုင်နိုင်တော့ချေ။ ငှက်ဖျားတက်သလို တဆတ်ဆတ်တုန်၍နေ သည်။ ဇေယျာစိုးက သူမ၏ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုရအောင် ရှာပြီး လက်ညှိုးလက်မကြားတွင် ချေပေး နေမိသည်။ နို့လေးတွေကို မမြင်ရလို့ အားမရပေမဲ့လဲ ဒီ လောက်ရတာကိုပင် ဇေယျာစိုးက ကျေးဇူးတင်နေမိသည်။ ပြီးသည်နှင့် သူမ၏ ဝမ်းဘိုက်သားလေးကို ရှပ်ကိုင်၍ မထိတထိလေး ဖျစ်၍ပေးတော့ရာ ကောင်မလေး တကိုယ်လုံး ကြက်သီးမွှေးညှင်းတွေထ၍လာရသည်။ လက်က တစထက် တစ အောက်ကိုဆင်းသွားရင်း သူမ၏ စကပ်ချိတ်လေးကို ဖြုတ်ကာ စောက်ပတ်လေးဆီသို့ လှမ်းလိုက်သည်။ အမွှေးလေးတွေက ပေါက်ကာစ နုနုတိုတိုလေးတွေဖြစ်သည်။ စကပ်အောက်မှာ ဘာမှ ဝတ်မထားတော့ ဇေယျာစိုးသည် သူမ၏ စောက်ပတ် အကွဲကြောင်းကို လက်ဖြင့် အသာလေးလျှောက်၍ ဆွဲနေသည်။ ပြီးတော့မှ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်မလက်ခလယ်တို့ဖြင့် ဟလိုက်ရင်း လက်ညှိုးကို အသာလေး သွင်းပေးလိုက်သည်။ သူမ၏ စောက်ခေါင်းလေးသည် ခြောက်သွေ့၍ ကပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ဇေယျာစိုးက သူမ၏ စောက်စေ့လေးကို ရှာပြီးကလိပေးတော့မှ အရည်လေးတွေ တစိမ့်စိမ့်ဆင်း လာသည်။ ကောင်မလေးကတော့ ရှက်လို့လားမသိ ခေါင်းငုံ့ရင်း မြင်းကိုသာ ဇွတ်နှင်၍နေသည်။ လက်လဲဝင်လို့ရရော ဇေယျာစိုးက စောက်ခေါင်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့ သူ၏ လက်ညှိုးကို သွင်းလိုက်ထုတ် လိုက်ဖြင့်လုပ်၍ပေးနေသည်။ နာရင်လန့်သွားပြီ မကောင်း တာကြောင့် ဖြေးဖြေးလေး မွှေ၍ပေးနေမိသည်။ သူမ၏စောက်စေ့လေးကတော့ စောက်ဖုတ်အပြင်ကိုပင် လက်တဆစ်လောက်စွန်းထွက်၍နေသည်။ ဇေယျာစိုးက လက်နဲ့ကလိပေးတာ ကြာလာတော့ ကောင်မလေးက သိပ်ပြီးအားရဟန်မတူတော့ချေ။ မပီမသ လည်ချောင်းသံလေးတွေ ထွက်လို့လာသည်။ စကားတော့ သိပ်ပြီးပြောရဲပုံမရသေးချေ။ ဇေယျာ စိုးသည် သူမ၏ ဖင်လုံးလုံး ကျစ်ကျစ်လေးကို အောက်ကနေ နှိုက်ပြီး ဆုတ်နယ်ပေးနေမိသည်။ တော်တော်လေးကြာ သွားပြီးမှ .. ““ညီမ မြင်းကို ခဏရပ်လိုက်”” သူမက မြင်းကိုရပ်လိုက်လျှင် ဇေယျာစိုးက မြင်း ပေါ်မှ ခုခန်၍ဆင်းလိုက်ပြီး သူမကိုပါ မြင်းပေါ်မှ ပွေ့၍ ချ လိုက်ရာ အားလွန်ပြီး မြေပြင်ပေါ်သို့ နှစ်ယောက်သား ဖင် ထိုင်ရက်ကျသွားကြလေသည်။ မြေပြင်ပေါ်သို့ရောက်သည်နှင့် ဇေယျာစိုးက ချက် ခြင်းပင် သူမကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွဲ၍လှဲ့လိုက်သည်။ ကောင်မလေးက သူ့ကိုမကြည့်ရဲဘဲ မျက်နှာလေးကို ငုံ့၍ ထားသဖြင့် ဇေယျာစိုးသည် သူမ၏ မျက်နှာလေးကို ဆွဲ၍ မော့လိုက်ကာ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ယုယုယယ လေး စုပ်ပေးလိုက်သည်။ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများသည် လေတိုးခံရသောနှင်းဆီပွင့်ချပ်များနှယ် တဆတ်ဆတ်တုန်၍နေသည်။ သူမကို အနမ်းဖြင့် ညှို့ယူနေတုံးမှာပင် ဇေယျာစိုး၏ လက်တဖက်က ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖြုတ်ပြီး အပြင်မထွက်ရသဖြင့် ဒေါသတကြီးပါးပျဉ်းထောင်နေသော လီးကြီးကို ဂုတ်ကနေကိုင်ပြီး ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။လီးကြီးသည် ချစ်ချစ် တောက်ပူနွေးနေပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်၍နေသည်။ မြေကြီးပေါ်တွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေလျှက် မှ ဇေယျာစိုးက သူ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကောင်မလေး အား ခွ၍ ကားကာ ဆန့်တန်းလိုက်သည်။
ပြီးတော့ ကောင် မလေး၏ ပေါင်နှစ်လုံးကိုလည်း သူ၏ပေါင်ရင်းတွင် တဖက် တချက်ဆန့်တန်း၍တင်ကာ သူ၏ခါးကို ခွစေလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကောင်မလေးကို ခါးမှဆွဲယူကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ဝကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့ လီးထိပ်ဖူးကို အသာ လေး ထိုးထဲ့လိုက်သည်။ ကောင်မလေး၏ မျက်နှာတစ်ချက်မဲ့၍ သွားသည်။ သိပ်တော့ မလွယ်လှချေ။ ““ညိမ ..အကို့ကိုဖက် .. မရှက်ပါနဲ့ကွယ်”” သူမကဇေယျာစိုး၏ ပုခုံးပေါ်မေးတင်ရင်း ရွရွလေး ဖက်ထားလိုက်သည်။ ဇေယျာစိုးက ကောင်မလေး၏ တင်သားနှစ်လုံးကို စုံကိုင်ကာ မလိုက်ပြီး သူ၏ ကာထာသော ခြေနှစ်ဖက်ကို စုလိုက်ကာ ကောင်မလေး၏ တင်သားများကို သူ၏ ပေါင်ပေါ်တွင်တင်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါတွင်တော့ ခြေဆင်း၍ ထိုင်နေတော့ ဇေယျာ စိုး၏ပေါင်ရင်းတွင် ခင်မေက ဇေယျာစိုး၏ ကိုယ်ကို ခြေနှစ် ဖက်ဖြင့် ခွ၍ထိုင်ထားသော အနေအထားသို့ ရောက်သွား သည်။ သူမ၏ စကပ်လေးကို လှန်၍ စောက်ဖုတ်ကိုလက်ဖြင့် နှိုက်ကြည့်လိုက်တော့ ရွှဲ၍နေသည်။ လီးကို စောက် ပတ်ဝတွင်တေ့၍ သူမ၏ ခါးကို ဖိချလိုက်သည်။ ““ဗြစ် .. ဗြစ်. ဗြစ်.. ဖေါက် .. ဒုတ် .. အ .. အ .. အား ..”” စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးကမဆန့်မပြဲ ဝင်သွားပြီး အပျိုမှေးကို ဖေါက်သံနဲ့သားအိမ်ကို ထိသံတို့သည် အစဉ်အတိုင်းထွက်ပေါ်၍လာသည်။ ခင်မေက ပထမ အ .. အ .. နဲ့ ကြိတ်မှိတ်ပြီးခံနေပေမဲ့ အပျိုမြှေးပေါက်ပြီး သားအိမ်ကိုလဲ ထိရော ငယ်သံ ပါအောင်အော်လိုက်တော့သည်။ သူမသည်ဇေယျာစိုးကို အတင်းပင် တွန်းသည်။ မရပါ။ ဇေယျာစိုးက သူမ၏ ခါးလေးကို အသေဖက်၍ ထားသည်။ ဇေယျာစိုးက သူ၏ခါးကို ယူကာ သူမ၏ ခါးလေး ကို ဆွဲရင်း ညင်သာစွာဖြင့်သူ၏ လီးကြီးများကို အသွင်း အထုတ်လုပ်ကာ လိုးပေးသည်။ တချက်တချက် ခပ်နာနာ လေးဆောင့်လိုက်သေးသည်။ ““ပြွတ်..စွပ်.. ဒုတ်.. အား .. အား .. ပလွတ်..ပြစ် .. ဒုတ် .. အ . အာ့ ..”” ဇေယျာစိုးက ကြမ်းတခါ ချော့တလှည့် တလှည့် ဖြင့် ဆက်တိုက်လိုးပေးလိုက်တော့ သူမ၏ စောက်ခေါင်းက ကျဉ်းလွန်းသဖြင့် လီးကိုလက်နဲ့ညှစ်ပြီး ဆုတ်ထားသလို ဖြစ်တာကြောင့် (၁၀)မိနစ်အကြာလောက်မှာပင် လီးကြီး သည် တဇတ်ဇတ်တုန်လာပြီး ခင်မေ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ သုတ်ရည်များကို ပန်း၍ထည့်လိုက်လေတော့သည်။ နှစ် ယောက်စလုံး၏ ပေါင်ခြံများတွင်တော့ သွေးတွေက ချင်း ချင်းနီရဲနေသည်။ ကောင်မလေးခမျာမှာတော့ ငယ်သေး သည့်အတွက် ပြီးလို့ပြီးမှန်းမသိ။ နုံးခွေသွားတာကိုဘဲ သိလိုက် သည်။ အရည်တွေ ပန်းထွက်ကုန်တာကိုလဲ သူမကိုယ်သူမ မသိချေ။ အောက်ဆုံးတော့ မျက်ရည်လည်ရွဲဖြင့် ဇေယျာစိုး ကို အတင်းကြုံး၍ဖက်ပြီး နမ်းပါတော့လေသည်။ ဒီနေရာမှနောက်ထပ် နာရီဝက်လောက် နားပြီးတော့မှ ဆက်၍ ခရီးနှင်ခဲ့လေသည်။ ဇေယျာစိုးနှင့် ခင်မေတို့သည် ဆက်၍ခရီးနှင်လာ ကြရင်း စမ်းချောင်းလေးတခုကိုတွေ့၍ နှစ်ယောက်သား ဆင်းပြီးကိုယ်လက်သုတ်သင်ကြသည်။ တယောက်နှင့်တယောက် စကားတော့ မပြောဖြစ်ချေ။ ခင်မေက ရှက်နေပုံရသည်။ ဇေယျာစိုးသည်လဲ အတွေ့ အကြုံသစ်ကြောင့် နုံးချိ၍နေသည်။ အေးမြသော ရေတွင် ထိနှစ်၍ချိုးလိုက်ကြတော့ နှစ်ယောက်စလုံးလန်း၍ သွားသည်။ ပြီးမှ နှစ်ယောက်သား ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။ ညနေ လဲအတော်စောင်းသွားပြီဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ တဖြေးဖြေးခရီးထွက်ခွာ၍ လာရာ ခဏမျှ ကြာတော့ သူတို့၏ ရှေ့နားမှ မြင်းခွာသံကြားရသည်။ မှောင် စပျိုးနေပြီဆိုတော့ ဘာမှသဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရချေ။
ဝါးတရိုက် လောက် ကွာတော့မှ ခင်မေက ဇေယျာစိုးဖက်သို့ လှမ်းရင်း ပြောလိုက်သည်။ ““မမလာနေပြီ .. ရှင်တော့ ကံကောင်းတာဘဲ”” ““ဟယ် ညီမလေး .. ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲ ..”” မဝင်းမေက ဇေယျာစိုးဖက်သို့ မျက်လုံးကစားရင်းမေးလိုက်သည်။ ““မမဆီလာတာပေါ့ ဟောဒီက ကိုဇေယျာစိုးက မမ နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ သူက ဦးနေစိုးရဲ့သားပေါ့။ မမ မှတ်မိရဲ့လား ငယ်ငယ်တုံးကတော့ တွေ့ဖူးတယ်လို့ အဖေက ပြောတယ်”” ““အော် ကိုဇေယျာစိုးလား ငယ်ရုပ်တော့ နဲနဲ ကျန် သေးတာဘဲ ဒါပေမဲ့ မပြောရင် မှတ်မိမယ်မထင်ဘူး”” ““တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ .. ကျွန်တော်လဲ မဝင်းမေကို အိမ်က ထိုင်ပြီး စောင့်မနေချင်တာနဲ့ စိုက်ခင်း လဲကြည့်ရအောင်ဆိုပြီး လိုက်လာတာပါ”” ““စိုက်ခင်းကတော့ အားလုံးအိုကေပါဘဲ .. မအိုကေတာက အလုပ်သမားတွေဘဲ။ လခတိုးတောင်းနေကြ တယ် ..”” ““အင်းလေ .. ကြည့်လုပ်ကြတာပေါ့ .. ဒါနဲ့ မဝင်းမေ ဘယ်သွားမလို့လဲ”” ““အိမ်ပြန်မလို့လေ .. ဘာမှ လုပ်စရာမရှိတော့ ဘူးရှင့် ..”” ““ဒါဆိုလဲ ကျွန်တော်တို့ပါ ပြန်လိုက်ခဲ့မယ်။ အဓိက ကတော့ မဝင်းမေနဲ့ တွေ့ဖို့ပါဘဲ။ နောက်ကြုံတော့မှဘဲ စိုက်ခင်းတွေကြည့်တော့မယ်။ အခုမိုးချုပ်နေတော့ ခရီးဆက် လို့ဖြစ်ပါ့မလား ..”” ““ကျမတို့ကတော့ သွားနေကျဘဲ”” ““ဒါဆိုလဲ သွားကြတာပေါ့ ..”” ““ညီမလေး မမ စကားပြောရင်းနဲ့ လယ်ဂျာစာအုပ် တွေ မေ့ကျန်ခဲ့တာ သတိရတယ်။ သွားယူလိုက်ပါကွယ် နော် မမတို့ ခရီးဆက်နှင့်မယ် အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ် မဟုတ်လား ..”” ““ဟင် .. မမကလဲ အဝေးကြီးသွားရမှာ မသွားချင်ပါဘူး ..”” ““သွားပါကွယ် ငါ့ညီမက လိမ္မာပါတယ်မမ မုန့်ဖိုးပေးမယ် ဟုတ်လား .. နော် .. ညီမ ..”” ချာတိတ်မသည် ဇေယျာစိုးကို စူးကနဲ တစ်ချက် ကြည့်ရင်း မြင်းကို ချာကနဲ လှဲ့ကာ မသွားချင်သွားချင်ဖြင့် ထွက်ခွာသွားပါတော့လေသည်။ ““ဒီညမ တစ်ယောက်ရှိလို့သာ ကျမသက်သာတာ နို့မို့ယင်တော့ သေမှာဘဲ အလုပ်တွေက များတော့ တယောက်ထဲ မနိုင်ဘူးရှင့် ..”” ““ခင်ဗျားတို့က မိသားစု သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းရှိတော့ ပျော်စရာဗျာ ကျွန်တော်အားကျတယ်ကျနော်ကတော့ တဦး တည်းသောသားမို့ အထီးကျန်သလိုပါဘဲဗျာ”” ““ကဲ..ခရီးဆက်ကြစို့”” ဇေယျာစိုးနှင့် မဝင်းမေတို့သည် စကားတပြောပြော ဖြင့် ခရီးဆက်ခဲ့ကြရာ စောစောကဇေယျာစိုးနှင့် ခင်မေတို့ ခရီးတစ်ထောက်နားသော စမ်းချောင်းလေးနားသို့ ရောက် ခဲ့လေသည်။ ““ဒီမှာ ခဏနားရအောင် ကိုဇေယျာစိုး .. ကျမမြင်းလဲမောနေပြီ”” ““ကောင်းတာပေါ့ဗျာ .. ကျွန်တော်လဲ မြင်းစီးရာပင်ပန်းနေပြီ”” ဇေယျာစိုးသည် မြင်းပေါ်မှ ဆင်း၍ မျက်ခင်းပေါ်အသာလဲလျှောင်းလိုက်သည်။ လကထိန်ထိန်သာနေသည်။ နေ့ခင်းနေ့လည် အ တိုင်းပင် လင်းထိန်၍နေသည်။ စမ်းချောင်းလေးကလဲ တ သွင်သွင်စီးဆင်း၍နေသည်။ စမ်းချောင်းလေး၏ တဖက်တချက် ဝဲယာတစ်လျှောက်မှာလဲ နှစ်ချို့သစ်ပင်ကြီးတွေက စမ်း ချောင်းလေး ကမ်းနဖူးနှင့် ပျမ်းမျှ (၁၀)ပေ (၁၅)ပေ၊ ပေ(၂၀)လောက်တို့တွင် အုံ့ဆိုင်းစွာဖြင့် ပေါက်၍နေသည်။ လေကလဲ တဖြူးဖြူးတိုက်နေတော့ ဒီနေရာလေးသည် အတော်ပင် သာယာလှပေသည်။ ဇေယျာစိုးတစ်ယောက် ပတ်ဝန်းကျင်၏ သာယာမှုကိုခံစားနေစဉ်မှာပင် သူ၏ခေါင်းတဲ့တဲ့တွင် မဝင်းမေက မတ်တပ်ရပ်၍လာသည်။ ဇေယျာစိုးက အောက်ကနေ ပင့်ကြည့် လိုက်တော့ သူမက ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြင့် ဖြစ်နေသည်။ သူမ၏ရွှေရင်အစုံသည်လည်း အောက်ခံပါဟန်မတူကြောင်း သတိထားမိလိုက်သည်။ သူမ၏ ပေါင်တံကြီးတွေကလဲ တုတ် တုတ်ခိုင်ခိုင်ဖြင့် ဖြစ်ကာ စောစောက မြင်းကုန်းနှီးမှာ ချိတ် ထားသော အထုတ်တထုတ်ကို သူမ၏ လက်တဖက်ဖြင့် ဆွဲ ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ““ကိုဇေယျာစိုး ဘိုက်မဆာဘူးလား ကျမတော့ ဆာရင်စားဖို့ ခေါပုတ်တွေယူလာတယ်။ စားဖူးတယ်မဟုတ်လား ရော့သကြားနဲ့ တို့စား စားမိယင်စွဲသွားတာချည်းဘဲ ကောင်းတယ် မဟုတ်လား”” မဝင်းမေသည် ပြောပြောဆိုဆို ခေါပုတ်ထုတ်ကို ဘေးသို့ချလိုက်ပြီး သူမသည် မြက်ခင်းပေါ်လှဲ၍ ချလိုက်သည်။ နှစ်ဦးသား စကားမပြောမိကြတော့ချေ။
ဒါပေမဲ့ ခဏနေတော့ ပလုတ်ပလောင်း စားနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး .. ““ကိုဇေယျာစိုး ရှင်နော် တချိန်ကျရင် ဒီတောအုပ် ထဲမှာ ကျမနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲနေခဲ့ပြီး ဘာမှ အကျိုးအမြတ် မရှိဘဲ အချိန်ကုန်ပြီး ပြန်သွားရတာလို့ တွေးပြီး နောင်တရနေချင်သလား”” ““အို ဘယ်ရချင်ပါ့မလဲဗျာ ..”” ဇေယျာစိုးက ပြောလိုက်ရင်း ငေါက်ကနဲထထိုင် ကာ သူမကို စိုက်၍ကြည့်မိသည်။ မဝင်းမေက တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်း .. ““ရှင် စိတ်ဝင်စားရင် အဝတ်အစားတွေ ချွတ်လိုက် ပါ။ ကျမလဲချွတ်လိုက်မယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ရှင်ကျမကို အထင်တော့မသေးလိုက်နဲ့ ကျမက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသမား နောက်ပြီး ခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်။ ကျမက ယောက်ျားတွေကြားမှာ ယောက်ျားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီးလုပ်နေရတာ။ ရှင့်ကို မြင်မြင်ချင်းဘဲ ကျမစိတ်ထဲမှာ ဆန္ဒတွေ တားဆီးလို့ မရတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ညီမလေးကို ပထုတ် လိုက်တာ ရှင်သဘောမတူလဲကျမကတော့ အတင်းကြံမလို့ဘဲ အခုတော့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့”” မဝင်းမေသည် စကားလဲပြော အင်းကျီကို ကျယ်သီး တွေဖြုတ်ပြီး ချွတ်ချလိုက်သည်။ သူမ၏ ညီမလို မဟုတ်ဘဲ အသားရေက နီစပ်စပ်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ မို့မို့တင်းတင်းဖြင့် နို့နှစ်လုံးဟာလဲ လရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့် တောက်ပဝင်းပြောင်၍နေသည်။ နို့သီးခေါင်း တွေက လက်သန်းတဆစ်လောက်ရှိပြီး အောက်ကို ငိုက်၍ နေသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ညိုရောင်သန်းနေသည်။ ပိတုန်းနှစ်ကောင် ကြာငုံပေါ်နားနေသလိုပင်ဖြစ်သည်။ ဇေယျာစိုးက တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ သူ၏ ကိုယ်ပေါ် မှ အင်းကျီတွေ ချွတ်ချလိုက်တော့ ကြွက်သားအဖုအထစ် များဖြင့် ဇေယျာစိုး၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အာသာငမ်းငမ်းဖြင့် သေချာစိုက်ကြည့်နေယင်း သူမ၏ ဘောင်းဘီချိတ်ကို ဖြုတ် ကာ ဇစ်ကိုဆွဲ၍ချလိုက်သည်။ ဟ သွားသော ဘောင်းဘီဇစ်ကြားမှ သန်မာသောစောက်မွှေးမဲမဲများသည်အခွေလိုက် ထွက်ပေါ်၍လာသည်။ မဝင်းမေကတော့ ခပ်စောစောပင် ဘောင်းဘီကို ဆွဲ၍ ချွတ်ချ လိုက်သည်။ အတွင်းခံဝတ်မထားသောကြောင့် ဘောင်းဘီ ကျွတ်ထွက်သွားလျှင်ပင် သူမ၏ တကိုယ်လုံးသည် ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်၍သွားရလေသည်။ ကြီးမားတောင့်တင်းပြီး ဖြောင့်စင်းလှသော သူမ၏ ပေါင်တံကြီးများက လရောင်အောက်တွင် ပုဇွန်ဆီရောင် ထ၍နေသည်။ သူမချွတ်ပြီးသွားသည်နှင့် ဇေယျာစိုးဆီသို့ လှလှပပလှမ်း၍လာပြီး ဘောင်းဘီကို ဝိုင်း၍ချွတ်ပေးသည်။ ဇေယျာစိုးက သူမ၏ နို့သီးတွကို လှမ်းပြီး ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။ ပျော့အိနွေးထွေးလှသော အထိအတွေ့ကြောင့် ဇေယျာစိုး၏ တကိုယ်လုံး တရှိန်းရှိန်းနဲ့ ရမက်ခိုးတွေ တက်လာတော့သည်။ ဇေယျာစိုးနှင့် မဝင်းမေတို့သည် မတ်တပ်ရပ်လျှက်မှ တယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖက်ကာ မျက်ခင်းပေါ်သို့ ထိုင်ချ လိုက်ကြသည်။ ဇေယျာစိုး၏ နှုတ်ခမ်းတွေက မဝင်းမေ၏ နှုတ်ခမ်းများကိုမော့၍ စုပ်နမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့ ချက်ခြင်း ပင် မဝင်းမေက တုံ့ပြန်ကာ ဇေယျာစိုး၏ နှုတ်ခမ်းများကိုပြန်လှန်၍ စုပ်နမ်းပေးလေသည်။ ရမက်ဇောတွေတက်နေသော ကျမတို့နှစ်ယောက် မြက်ခင်းပေါ်ကို အကျနပင် ယှဉ်တွဲ၍ လှဲချလိုက်မိပါတယ်။ ကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာ ရင်ချင်းအပ်ရက် ဆီးစပ်ချင်းထိရက် ပေါင်ချင်းထိရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇေယျာစိုးဟာ ကျမရဲ့ ကော့ထောင်နေတဲ့ နို့သီး ခေါင်းလေးကို ပါးစပ်နဲ့ ငုံပြီး စို့ပေးတယ်။ တော်တော်သန် တဲ့ လူဘဲရှင်။ ““အိုး .. ဟင့် ..အင့် .. ကိုစိုး .. ကိုစိုး .. အို ကိုစိုး ..ရယ် စို့စမ်းပါ .. ကျမနို့သီးကို ကောင်း ကောင်းစို့ပေးစမ်းပါ။ ဟင်းဟင်း ကောင်းတယ် .. ကောင်း တယ် .. နို့စို့ပေးတာ သိပ်ခံလို့ ကောင်းတာဘဲ .. ဟင့်.. ဟင့် .. ဟင့် ..”” သူကနို့စို့ပေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ နို့သီးတဝိုက်ကိုလဲလျှာနဲ့ ဝိုက်ဝိုက်ပြီး ရက်ပေးလိုက်သေးတယ်။
အဲဒီလိုရက်လိုက်တဲ့အခါများ ကျမဟာ မျက်ချင်းပေါ်ကနေ ကော့ပျံကြွတက်သွားရတာဘဲ စိတ်တွေကလဲ အရမ်းကို ထကြွလို့ရွလာရပါတယ်။ နို့သီးနှစ်ခုကို တလှည့်စီစို့ပေး ရက်ပေးပြီးတဲ့ နောက် ဇေယျာစိုးရဲ့ ပါးစပ်ဟာ အောက်ဖက်ကို တစတစ ရွေ့ လျှားလာပါတယ်။ ကျမရဲ့ ဗိုက်သားပျော့ပျော့ အိအိ ချပ် ချပ်လေးတစ်လျှောက်အသာရက်ပေး စုပ်ပေးရင်း ရွေ့လျှား လာလိုက်တာ ကျမရဲ့ ဘိုက်သားပြင်လေးပေါ်မှာ သူရက် ပေးထားလို့ တံတွေးလေးတွေနဲ့ ပြောင်လက်လို့နေပါတယ်။ တဖြေးဖြေးအောက်ဖက်ကို ရွေ့ဆင်းလာတဲ့ ဇေယျာ စိုးရဲ့ပါးစပ်ဟာ ကျမရဲ့ချက်ပေါ်ကနေ ဆီးခုန်ဖက်ကို ရွေ့ ဆင်းသွားပြီး တဖြေးဖြေး သူ့ပါးစပ်ဟာ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ် နဲ့ နီးသထက်နီးစပ်လာရပါပြီရှင်။ ကျမဟာ အလိုးခံရတာကို သဘောကျသလို စောက်ပတ်ရက်ပေးတာကိုလဲ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ““အား .. ဟင်းဟင်း .. ကိုစိုးရာ ဟုတ်ပြီ .. ဟုတ်ပြီ .. ဟင်းဟင်း .. ကျမစိတ်တွေ အ၇မ်းထလာ ပြီ နော် .. အို အို. ရက် .. ရက်ပါတော့ .. ကျမ စောက် ဖုတ်ကို ထိုးထဲ့ပြီး ရက်လိုက်စမ်းပါ”” ဆီးစပ်တစ်လျှောက် တဖြေးဖြေး ရွေ့ဆင်းလာနေတာကို မစောင့်နိုင်တော့ဘဲ ကျမက အငမ်းမရ ထုတ်ဖေါ် ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခိုက်မှာဘဲ ကျမရဲ့ စောက် ပတ်ထဲက အရည်ကြည်တွေက အတော်ကြီးကို စိမ့်ထွက် လာပါတယ်ရှင်။ ဘယ်လောက်များသလဲဆိုရင် အရည်တချို့ ဟာ အပြင်လျှံထွက်ပြီး ဖင်ခေါင်းတစ်လျှောက် စီးကျသွားတဲ့ အထိပါဘဲရှင်။ ဟော .. သူ့ပါးစပ်က ကျမစောက်ပတ်နားကို ရောက်လာပြီး ရက်တော့ရက်မပေးသေးပါဘူး .. ““ကျမဟာ သူ့ပါးစပ်နဲ့ ကျမစောက်ပတ် ထိမိ အောင် ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးမိတယ်။ အလိုးခံရတဲ့ အခါ လုပ် ပေးသလိုမျိုးပေါ့ ။ ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်ဟာ ဖေါင်းပြီး စောက်စေ့လေး လဲမာကြောထောင်ကြွလို့တက်နေပါပြီ။ အရမ်း အရမ်း ခံချင် နေတာ။ အစုပ်ခံချင်နေတာ။ ဟုတ်တယ် မနေနိုင်တော့ဘူး။ ““ရက်ပေးပါ ကိုစိုးရယ် ကျမစောက်ဖုတ်ကို ကောင်းကောင်းရက်ပေးစမ်းပါရှင်။ ကျမ မနေနိုင်လွန်းလို့ပါ””ကျမက ထပ်ပြီး လော်ဆော်တိုက်တွန်းလိုက်မိ ပြန် ပါတယ်။ ဇေယျာစိုးကတော့ တကယ်ပါဘဲရှင်။ မရက်ခင် အဖုတ်ကို အရင်ဖြဲကြည့်နေတော့တယ်။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ကျကျနနကိုင်ပြီး အသေအချာကို ဖြဲ ကြည့်နေတယ်။ ကျမစောက်ဖုတ်ဟာ နီရဲပြဲအာပြီးနေမှာပါ ဘဲ ..။ ကိုယ့်ပေါင်ကြားကိုယ် ငုံ့မကြည့်နိုင်တာကြောင့် အဖုတ်ရဲ့အနေအထား ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတော့ ကျမ အသေအချာ မသိဘူးပေါ့ရှင်။ စိတ်ကူးနဲ့ဘဲ မှန်းဆကြည့်ရတာပါ။ အဲသလိုဖြဲကြည့်ပြီးမှ သူ့ပါးစပ်ကို စောက်ပတ်ပေါ် ကျကျနနအုပ်ပြီး မရွံမရှာစုပ်နမ်းတယ်။ ““အောင်မလေး ..လေး .. ကိုစိုးရဲ့”” ကျမလေ တကိုယ်လုံးကို တုန်သွားရပြီး ငယ်သံပါ အောင်အော်ပစ်လိုက်မိပါတယ်။ ကောင်းလိုက်တာလဲ မပြောပါနဲ့တော့ ဘယ်နဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ပါးစပ်နဲ့တေ့ကပ်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်သလိုမျိုး စုပ်ပေးတာကို သူ့ရှာကလည်း အဖုတ်ထဲကို ထိုးထဲ့ပြီး လှည့် ပတ်ကလိပေးသည်။ ရက်ပေးသည်။
ကျမ အသက်ရှူပြင်းတွေ ပြင်းလာတယ်။ ကျမရဲ့ ဝမ်းပျဉ်းသားပျော့ပျော့အိအိလေးဟာ ပိန်လိုက် ဖေါင်းလိုက် ကိုဖြစ်လို့ ပေါင်ကြီးနှစ်ချောင်းလဲ ကားလိုက် စုလိုက်နဲ့ဖြစ် နေရတယ်။ သူက ကျမစောက်ပတ်မှာ စိုရွှဲနေတဲ့ စောက်ရည် ကြည်တွေကို လျှာနဲ့ တပြတ်ပြတ်မြည်အောင် ရက်ပေးနေ ပြန်တယ်။ တကယ့်ကို ရက်ရက်ရောရော ရပ်ပေးနေတာ ကျမအဖို့ အရမ်းကိုငြိမ်ပြီး အရမ်းကို ကောင်းနေရတာပါဘဲ။ အဖုတ်ကိုရက်ပေး စုပ်ပေးတာထက် ပိုထိတာပေါ့ စောက်ပတ်ထဲကို လျှာကိုထိုးထိုးပြီး လိုးနေတဲ့သဘော ဖြစ် နေတာကိုး ..။ ““အား ပါးပါး ဟင်း .. ထိုးစမ်းပါ ကိုစိုးရ ဟင့် မွှေပေးစမ်းပါ .. အား ကောင်းလိုက်တာ ဟင်းဟင်း .. ကျမ စောက်ပတ်ထဲကို ရှင့်လျှာကြီး အကုန်ဝင်အောင် ထိုး သွင်းပေးစမ်းပါ .. အား .. ကောင်းလှချည်လား ကိုစိုးရာ အမလေးလေး .. ဟုတ်ပီ ..ထိုး ထိုး လိုးလိုး..ရှာထိုးပေးစမ်းပါ”” ကျမ ပါးစပ်ကလဲမရှက်နိုင်တော့ဘဲ တစ်တစ်ခွခွ ကြီးကို ပြောလိုက်မိသည်။ သူကလည်း ကျမစောက်ပတ်ကို ရှာနဲ့ အပီထိုးထိုး ပြီး ကျကျနနကို လိုးပေးနေတာ အဖုတ်ထဲ သူ့လျှာတစ်ဆုံး တိုင် တိုးဝင်လာတဲ့အခါများ ကျမဟာ လည်ချောင်းထဲက ပါ တအင်အင် အသံတွေ ထွက်လာတဲ့အထိဖြစ်ရပါတယ်။ ကျမ တကိုယ်လုံးမှာ ရှိသမျှအကြောအချင်အားလုံးမှာ သွေးတိုးအရမ်းမြန်ကုန်ပြီး ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေတယ်။ တကိုယ်လုံး ငဖယ်ပျံသလို ကော့ပျံလို့ အကြီးအ ကျယ်ကို ပြီးလုနီးလာမှန်း ကျမရိပ်မိတယ်။ ကျမစောက်ပတ်ထဲကို ရက်ပေး လျှာနဲ့ အဖုတ် ခေါင်းထဲကို ထိုးပေးလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျမက သူ့လီးကြီးကို ညာလက်နဲ့ လှမ်းဆုတ်လိုက်ပြီး ဂွင်းတိုက်သလိုမျိုး ပွတ် ပေးနေမိပါတယ်။ လက်ထဲမှ တဆုတ်တခဲကြီး ဖြစ်နေတဲ့ သူ့လီးချောင်းကြီးက အားရစရာကောင်းလိုက်တာ ဒီလီးကြီးစောက်ပတ် ထဲကို ထိုးသွင်းပြီး လိုးတာကို ကျမ အရမ်းခံချင်လာတယ်။ လျှာနဲ့ထိုးပြီးသွင်းမှာထက် စောက်ပတ်ကိုလီးနဲ့ လိုးရင်းပြီးချင်လာတယ်။ ဟုတ်တယ် လီးနဲ့က ပိုပြီး အရသာကောင်းစေမှာ ..။ ““ကိုစိုးရယ် .. ကျမကို လိုးပါတော့ရှင့်လီးကြီးကို ကျမစောက်ပတ်ထဲ ထိုးသွင်းပေးစမ်းပါ။ လုပ်ပါကိုစိုးရယ် ကျမကို လိုးပေးစမ်းပါရှင် .. ကျမ အပေါက်ထဲကို ရှင့်အ ချောင်းကြီး တအားကုန်ဆောင့်လိုးသွင်းလိုက်စမ်းပါ။ ကျမ ခံချင်နေပြီ။ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘူး လိုးပါကိုစိုးရယ် လိုးစမ်းပါရှင် ..”” ကျမက ထုတ်ဖေါ် တောင်းဆိုလိုက်မိပါတယ်။ အရမ်းကို လိုးချင်နေပြီကိုး ရှက်မနေတော့ပါဘူး ပြီးတော့ စိတ် တူ ကိုယ်တူ လိုးကြတာဘဲ။ ဇေယျာစိုးကလဲ ကျမလိုဘဲ ထန်နေတပါတယ်။ အ ဖုတ်ရက်ပေးတာကို ချက်ခြင်းရပ်ပြီး ကျမကိုယ်ပေါ် တက်ခွတယ်။ တက်ခွတယ်ဆိုတာနဲ့ ကျမက သူ့လီးကို ဆွဲယူပြီး နီရဲပြဲလန်နေတဲ့သူ့လီးထိပ်ဖူးကြီးကို စောက်ရည်ကြည်တွေ နဲ့ စိုရွှဲမို့ဖေါင်းကြနေတဲ့ စောက်ဖုတ် အဝမှာ တေ့ပေး လိုက်ပါတယ်။ စိတ်က အရမ်းထနေတဲ့ ဇေယျာစိုးဟာ ကျမကတေ့ပေးလိုက်တာနဲ့ ဖိချထိုးသွင်းလိုက်တာ တစ်ချက်တည်း နဲ့ သူ့လီးချောင်းကြီး တစ်ချောင်းလုံး စောက်ဖုတ်ထဲကို တနင့် တပိုးဝင်သွားတော့တာပါဘဲ။ သူ့လီးက မသေးပါဘူးရှင်။ ရှစ်လက်မသာသာလောက် ရှည်ပြီး ကျပ်လုံးလောက် ကိုတုတ်တာ ..။
တစ်ချက်တည်း အဆုံးဖိသွင်းလိုက်တော့ အဖုတ် ထဲမှာ စေးပိုင်တင်းကြပ်သွားတာဘဲ။ ဖိန်းရှိန်းပြီး ကြက်သီး ထသွားရအောင်လဲ ကောင်းတယ်။ ကျမပါးစပ်က ““အိုး .. ကျွတ်..ကျွတ်.. ကျွတ်”” လို့ စုပ်သပ်ညည်းလိုက်မိတယ်။ နာတာကြောင့် ညီးတာလား ကောင်းတာကြောင့် ညီးတာလား ကျမကိုယ် ကျမတောင်မခွဲခြားတတ်တော့ပါ ဘူး နာလဲနာ ကောင်းလဲအရမ်းကောင်းနေတာကိုး။ လီးအဆုံးဝင်သွားပြီးတာနဲ့ ဇေယျာစိုးဟာ ကျကို စပြီးလိုးပါတော့တယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ခပ်ဖြေးဖြေး တချက်ခြင်း ညောင့် လိုးပေးတာ။ သူ့လီးအဖုတ်ထဲ တိုးဝင်လာတိုင်း ကျမက အိုး ကနဲ ဟင် ကနဲ ပါးစပ်က အသံထွက်မြည်တမ်းနေမိတယ်။ လီးထွက်သွားတယ်။ နောက်ပြန်ဝင်လာတယ်။ ဝင်နေတဲ့လီးကို ထုတ်ယူတယ်။ နောက်ပြန်ထိုး သွင်းတယ်။ထွက်လိုက် ဝင်လိုက် ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့။ သူ့လီးက ရှစ်လက်မကျော်ကျော် ရှည်တာဆိုတော့ အဆုံးထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ သားအိမ်ကို ဒစ်ကြီးနဲ့ ထိထိ နေတယ်။ အဲဒီလိုသားအိမ်ထဲကို စိုက်ဝင် ထိမိတာကလဲ အောင့်အောင့်သွားပေမဲ့ အရသာတမျိုးထူးတယ်ရှင်။ အလိုး ခံရတိုင်းသားအိမ်ကို ထိတာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ လီးရှည်မှသာ သားအိမ်ထဲထိ စိုက်ဝင်တာ။ ဇေယျာစိုးရဲ့လီးကလဲ အလုံးက တော်တော်တုတ် တာမို့ စောက်ခေါင်းထဲက အတွင်းသားတွေကိုလဲ သိပ်သိပ် သည်းသည်းနဲ့ ပြည့်ပြည့်၀၀ ပွတ်တိုက်မိတယ်။ ပြီးတော့ သူ့လီးထိုးသွင်း ပြန်ထုတ်လုပ်တာကလဲ လမ်းကြောင်းမှန်တယ်။ အဝင်မှာရော အထွက်မှာရော လီး တန်လုံးပတ် အပေး့ိုင်းက ကျမစောက်စေ့ကို ကျကျနန ပွတ် တိုက်နေတယ်လေ။ ကျမဟာ တကယ့်ကို ရာနှုံးပြည့် ပြည့်ပြည့်၀၀ အလိုးခံနေရတာပါ။ မစို့မပို့ မဟုတ်ဘူး ထိထိမိမိ စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ နင့်နင့်ပိုးပိုးကြီးပေါ့။ ဒါကြောင့်လဲ ကျမဟာ တကိုယ်လုံးကို သူ့လက် ၀ ကွက်ပြီးပုံအပ်ထားလိုက်တာဘဲ။ သူ့စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်ရာ လုပ် လိုးချင်သလိုလိုးပေတော့။ ကျမစိတ်တွေ ပိုထန်လာသလို ကျမတို့ နှစ်ယောက် စလုံးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွဟာလဲ ပြင်းထန်လာပါတယ်။ သူက ညောင့်နေတာကနေ မြန်မြန်သွက်သွက်နဲ့ အားပြင်းပြင်းဆောင့်ပြီး လိုးလာပါတယ်။ ကျမကလဲ သူ့ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်အောင် အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးတယ်။ အရှိန်နဲ့ဝင်လာတဲ့လီးကြီး အဖုတ်ထဲကို နက်နက် ရှိုင်း ရှိုင်း အဆုံးဝင်နိုင်အောင် ပေါင်ကိုဖြဲပေးတာမျိုးကိုလဲ အ ချိန်အဆမိမိလုပ်ပေးတယ်။ ဇေယျာစိုးရဲ့ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသံတွေ ကျမရဲ့ ညီးညူမြည်တမ်းသံတွေဟာ ပဲ့တင်ထပ်လို့နေပါတယ်။ ဒီအသံ တွေဘဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လိုးနေကြတဲ့ အသံဗလံ တွေလဲ ပါတာပေါ့။ သူ့ဆီးစပ်နဲ့ ကျမဆီးစပ် ရိုက်မိကြတဲ့ အသံတွေက တဖတ်ဖတ် သူ့ဂွေးအုကြီးတွေ ကျမဖင်ဆုံကြီးကို ထိရိုက်မိ တဲ့ အသံကလဲ တပြတ်ပြတ် စောက်ရည်ကြည်တွေ အတော် ဘဲ စိုရွှဲနေတဲ့ ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို သူ့လီးချောင်း ကြီးက တရှိန်ထိုးဆောင့်သွင်းလိုက်တဲ့ အသံက တဘွပ်ဘွပ်။ အဲဒီအသံပေါင်းစုံ ရောနှောပေါင်းစည်းထားတဲ့ ကာမ တေးသံသာက ကျမတို့ရဲ့ ကာမစပ်ယှက်ပွဲကြီးကို ပိုပြီး အသက်ဝင်စေပါတယ်။ ဒီအသံတွေကြားနေရတာကလဲ ကျမတို့ နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ပိုပြီး စိတ်ကြွစရာပေါ့။ ပိုပြီးအရသာတွေ့စရာပေါ့။ ““ဘွပ် ဘွပ် .. ဖတ် .. ဘွပ် .. ဖွတ်..ဘွတ်”” ““အားပါး ရှီး .. ဆောင့် .. ဆောင့် ကျမကို တ အားဆောင့်လိုးစမ်းပါရှင် .. ဟင်း . ဟင်း .. ရှင့်လီးကြီး တစ်ချောင်းလုံး လအုပါ မြုပ်ဝင်သွားအောင် အားပြင်းပြင်း နဲ့ ဆောင့်သွင်းလိုက်စမ်းပါရှင် .. ခံလို့ ကောင်းလွန်းလို့ပါ”” ““ဘွတ်..ဘွတ်..”” ““အား ဟုတ်ပီ .. အဲလိုမျိုး .. အဲလိုမျိုး ဆောင့် သာဆောင့် . .အဖုတ်ကွဲချင်ကွဲပါစေ .. အမလေး.. ကောင်းလိုက်တာရှင် .. အား ..”” ကျမလေ အားပြင်းပြင်းနဲ့ ထိမိတဲ့ သူ့ဆောင့်ချက် တွေကို ရင်သိမ့်တုန်အောင် ခံရင်း တစ်ချီပြီး တချီ ဆက် တိုက်ကို ပြီးနေတာဘဲ။ တချို့ယောက်ျားတွေနဲ့ ဆိုရင် တချီကောင်းလောက်သာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကျမ အခု ဇေယျာစိုးလိုးတာခံရတော့မှ ဆက် တိုက်ပြီးတဲ့အရသာကို တုန်ခါမောဟိုက်အောင် ခံစားနေရ ပါတယ်ရှင်။
ကျမလေးချီမြောက်ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ ဇေယျာစိုး ဟာလည်း တရှူးရှူးနဲ့ အသက်ရှူ အရမ်းမြန်လာတယ်။ ဇေယျာစိုးရဲ့ ဆောင့်လိုးချက်တွေကလဲ ဘာကြမ်း သလဲ မမေးနဲ့။ တဘွပ်ဘွပ်နဲ့ စက်သနပ်ပစ်တာထက် တောင် မြန်နေသေးတယ်။ သူလဲ အရည်တွေထွက်ဖို့ နီးနေပြီဆိုတာ ကျမလဲသိတယ်။ ကျမကို လေးချီ ဆက်တိုက်ပြီးအောင် လိုးပေးနိုင် တဲ့သူ့လီးအစွမ်းတော့ ကျမ အရမ်းချီးမွမ်းမိပါတယ်။ သူ့အတွက်အရသာ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးချင် တဲ့ ဆန္ဒကြောင့် ကျမဟာ သူ၏လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးကို အသာလက်နဲ့ပတ်ကျော်ပြီး သူ့ဂွေးအုတွေကို ညာလက်နဲ့ အ သာလှမ်းကိုင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အသာဖွဖွလေး ဆုတ် နယ်ပေးတယ်။ ပွတ်ပေးတယ်။ ဒါဟာ ယောက်ျားတွေ သိပ်ကြိုက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ပြုစုပေးမှုလေးတစ်ခုပေါ့။ ဇေယျာစိုးဟာ ပိုပြီး အရသာတွေ့သွားတာ သေချာ ပါတယ်။ အသက်ရှူပိုမြန်လာသလို ဆောင့်လိုးချက်တွေ ကလဲ ပိုအားကောင်းပြီး ပိုကြမ်းလာတယ်။ နောက်တော့ သူ့လီး ကြီး ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ လှုပ်ရှားသွားတာကို ကျမသိရတယ်။ သူ့လရည်တွေ ပန်းထုတ်တော့မယ်။ ““ကိုစိုး .. လရည်ထွက်ရင် ကျမစောက်ပတ်ထဲမှာ ဘဲ ပန်းထုတ်ပေးနော် အဖုတ်ထဲမှာလရည်တွေ ပြည့်လျှံ သွားအောင်ကို ပန်းထည့်ပေးပါ နော် .. နော် ..”” ကျမက ပါးစပ်ကလဲ ပြော စောက်ဖုတ်ကိုလဲ ညှစ် သူ့လီးကိုလဲ စုပ်ယူလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ သူပလီးထဲက သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်လာပါလေရော။ ပူပူနွေးနွေး အရည်တွေ စောက်ဖုတ်ထဲ ပြန့်နှံ့သွားတာကို ကျမခံစားသိရှိလိုက်ရပါတယ်။ သူ့သုတ်ရည်တွေကများလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။ ပန်းထွက်လာ တာ မနဲဘူး စောက်ဖုတ်ထဲ ပြည့်ရုံမကဘူး အပြင်တောင် လျှံထွက်တယ်။ အဖုတ်ထဲ သုတ်ရည်တွေ အားကောင်းကောင်းနဲ့ ပန်းထည့်ပေးလိုက်တာမို့ ကျမလဲ ငါးကြိမ်မြောက်ပြီးသွား ပါတော့တယ်။ အဲဒီငါးကြိမ်မြောက်ပြီးတာဟာလဲ တကယ့်ကိုထိတယ်။ တကိုယ်လုံး ခွေပျော့နုံးလျှသွားစေလောက်အောင် ကို ဖြစ်သွားရတာ။ စောက်ရည်တွေ ထွက်တာကလဲ အရမ်းဘဲလေ ..။ ဒီနောက်တော့ ဇေယျာစိုးလဲ ငြိမ်ကျသွားတယ်။ လိုးပွဲကြီးက တစခန်းသတ်ပြီပေါ့။ သုတ်လွှတ်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ သူ့လီးက ပျော့ခွေ သွားတယ်။ ဇေယျာစိုးဟာ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲက သူ့လီးကို ဖြုတ်ယူပြီး အသာဘေးကို လှိမ့်ဆင်းသွားတယ်။
ပက်လက် စင်းစင်းကြီးအိပ်ရင်း အသက်ပြင်းပြင်းရှူနေတယ်။ သူက အ၇မ်းကိုမောဟိုက်သွားတာပါဘဲ။ သူက ပိုအားစိုက် လှုပ်ရှားလိုးဆောင့်ပေးခဲ့ရတာကိုး ..။ ခဏကြာတော့ ကျမ နည်းနည်း အမောပြေသွား ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျမဟာ လှဲအိပ်နေရာကထပြီး သူ့ခြေရင်းဘက်ကိုသွားပါတယ်။ သုတ်ရည်တွေ စောက်ရည်တွေ ပေကျံနေတဲ့ သူ့လီးကို ပါးစပ်နဲ့ အသာစုပ်ပေးတယ်။ သန့်စင် သွားအောင်လည်း လျှာလေးနဲ့ အသာယက်ပေးလိုက်တယ်။ ဇေယျာစိုးဟာ လီးစုပ်ပေး ယက်ပေးနေတဲ့ ကျမကို တချက်ပြုံးပြီးကြည့်တယ်။ နောက်တော့ မျက်စိကို အသာမှိတ်ပြီး ဇိမ်နဲ့ မှိန်းနေတယ်။ သူ့လီးကို သန့်သွားအောင် စုပ်ပေး ရက်ပေးပြီးတော့ ကျမက သူ့ဘေးမှာ အသာပြန်လှဲလျောင်းလိုက်တယ်။ သူ့ရင် ခွင်ထဲမှာ ခေါင်းလေး တင်လို့ပေါ့။ ဇေယျာစိုးက ကျမရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို အသာ လက်တဖက်နဲ့ သိုင်းဖက်တယ်။ ကျန်တဲ့လက်တဖက်ကတော့ ကျမ ပေါင်ကြားက စောက်ဖုတ်ပေါ် အသာအုပ်ပြီးတင်လိုက် တယ်။ ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ကို အသာညှစ်လိုက်တာ စောက်ဖုတ်ထဲက သုတ်ရည်နဲ့ စောက်ရည်ကြည်ရောနေ တာတွေ အပြင်ကို ယိုစီးကျလာတော့တာပါဘဲ။ ခဏလောက်နားနေကြပြီးတဲ့နောက် ဇေယျာစိုး ဟာ ကျမပါးစပ်ကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ တေ့ကပ်ပြီး စုပ်နမ်းပြန်တယ်။ ရှာကိုလဲ ကျမပါးစပ်ထဲထိုးထဲ့ပြီး ကလိတယ်။ ကျမက တုံ့ပြန်နမ်းပြီး သူ့လီးကို လက်နဲ့အသာကိုင် စမ်းကြည့်တော့ ဟော .. သူ့လီးကြီး မတ်တောင်နေတာ ပါဘဲလား။ ကျမဖြင့် ယုံတောင် မယုံချင်သလိုဘဲ ကျမ တွေ့ ဖူးသမျှယောက်ျားတွေကတော့ သုတ်လွှတ်ပြီးသွားရင် လီးလဲ ပျော့ လူလဲ နုံးခွေကျသွားတာပါဘဲ လီးပြန်တောင်လာတဲ့ လူ မတွေ့ဖူးသေးဘူး။ ဇေယျာစိုးရဲ့လီးကတော့ ခဏအနားယူပြီးတာနဲ့ ပြန်တောင်လာပြီး တောင်တာမှ မတ်ကိုနေတာ။ ကျမအဖို့ ကော်ပေါက်ဘဲပေါ့။ တစ်ချီဆက်ပြီး လိုးနိုင်တော့မှာကိုး။ ““ဟောတော့ .. ရှင့်လီးကြီး ပြန်တောင်လာပါ ရောလား..”” ကျမက အံ့သြဝမ်းသာစိတ်နဲ့ ရေရွတ်လိုက်မိတယ်။ ““ဟုတ်တယ် တောင်လာပြီ လီးတောင်တော့ ဆက် လိုးကြတာပေါ့ မဝင်းမေလဲ အလိုးခံနိုင်သေးတယ် မဟုတ်လား..”” ““ခံမယ် .. ဘာလို့ မခံနိုင်ရမှာလဲ ရှင်လိုးနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျမကတော့ အဆင်သင့်ဘဲ ..”” ““ဟုတ်ပြီ .. ဒါဆိုရင် လေးဖက်ထောက်ပြီးကုန်းပေး..”” ““ရတယ် ..”” ကျမလဲ သူပြောသလို ချက်ချင်းကုန်းပေးလိုက်ပါ တယ်။ စောစောကလိုးထားတာကြောင့် ကျမအဖုတ်က အရည် ရွှမ်းပြီးသားပါ။
ကျမက လေးဘက်ထောက် ကုန်းပေးပြီးတဲ့အခါ ဇေယျာစိုးက ကျမဖင်ကြီးနောက်မှာ နေရာယူလိုက်ပါတယ်။ ပြီး တော့ ကျမရဲ့ဖင်သားကြီးနှစ်ခြမ်းကိုဆွဲဖြဲပြီး ဖင်ပေါက်ပေါ် ကို တံတွေးထွေးလိုက်ပါတယ်။ ““အို.. ဟင့် . ကိုစိုး ဘာလုပ်အုံးမလို့လဲဟင်”” ဖင်ပေါက်တဲ့တဲ့ တံတွေးထွေးချတာခံထားရတာကြောင့် ကျမ ခါးလေးတွန့်သွားပြီး ညုတုတုနဲ့ မေးလိုက်မိ ပါတယ်။ ဘာအတွက်နဲ့ ဖင်ပေါက်ကို တံတွေးဆွတ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ ကျမသိပါတယ်။ ဖင်လိုးမလို့ဆိုတာကိုပေါ့။ ““မဝင်းမေ ဖင်ကြီးက ဖြူဖွေးအိပြီး အယ်နေတာ ဆိုတော့ ကျနော် ဖင်လိုးချင်လာလို့ပါ .. မဝင်းမေ ဖင်ခံမယ် မဟုတ်လား”” ““ရှင် လိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျမခံပါ့မယ် သိပ် တော့ မကြမ်းနဲ့နော် ရှင့်လီးကြီးက အရမ်းကြီးတာဘဲ တအားဆောင့်ရင် ကျမဖင်ကွဲသွားမှာပေါ့ ..”” ““စိတ်ချပါ မဝင်းမေရဲ့ နာအောင် ကျွန်တော် မလုပ် ပါဘူး အရသာတွေ့ပြီး ကောင်းကောင်းဘဲ လုပ်ပေးမှာပါ”” ပြောပြောဆိုဆို ဇေယျာစိုးက ကျမစအိုဝမှာ သူ့လီး ကိုထောက်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖိထိုးသွင်းလိုက်တာ လီးက ထစ်ပြီးအထဲကို တိုးဝင်လာပါတယ်။ ““အား . ကျွတ်..ကျွတ်.. ဖြေးဖြေးသွင်းရှင့် .. နာတယ် ..”” စအိုဝပြဲအာသွားတာကြောင့် ကျိန်းစပ်ပြီး နာကျင်လှလို့ ကျမညီးလိုက်မိပါတယ်။ ဖင်လိုးတဲ့အခါ လီးစသွင်းသွင်းချင်း နာတာကတော့ ထုံးစံပါဘဲ ကျမ နားလည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဒူးခေါင်းကို အားပြုပြီး ဖင်ဆုံကြီးကို အသာကော့ပင့် ပေးထားလိုက်ပါ တယ်။ ဖင်လိုးခံဖူးတာကြောင့် ကျမဟာ ဖင်ပေါက်ထဲ လီးအဝင် အဆင်ပြေအောင် လမ်းကြောင်းပွင့် ပေးတတ်နေ ပါတယ်။ ဇေယျာစိုးကလဲ သူ့လီးကြီးကို ဆက်ပြီး ဖိထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ ကျဉ်းကျဉ်းကြပ်ကြပ်နဲ့ဘဲ သူ့လီးတစ်ချောင်းလုံး ကျမဖင်ထဲအဆုံးဝင်သွားပါလေရော။ အဲဒီတော့ ဇေယျာစိုးက ကျမရဲ့ ဖင်သားကြီးနှစ် ခြမ်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်ပြီး သူ့လီးကြီးကို ကျမဖင်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက် ပြန်ဖိ ဆောင့် သွင်းလိုက်နဲ့ ကျမကို ကောင်းကောင်း ဖင်ဆော်နေပါတော့ တယ်။
နာတာကတော့ သိပ်ကို နာတယ်ရှင့်။ ကောင်းတာ ကလဲ အသဲခိုက်မတတ်ပါဘဲ။ ကျမဟာ တညီးညီး တအားအား အော်ဟစ် ညီး တွားရင်း ဇေယျာစိုးရဲ့ဖင်လိုးတာကို ခံနေပါတယ်။ သူဟာ ဖင်လိုးတဲ့အခါမှာလဲ လီးကို အဆုံးဖိဆောင့် သွင်းတယ်ရှင့်။ ဖင်လိုးခံရတာဟာ နာကျင်မှုနဲ့ မူတ ထူးကဲစွာ ကောင်းလှတဲ့ အရသာကို ရောပြန်းထားတဲ့ ကာမအရသာ တစ်မျိုးကို ခံစားနေရပါတယ်။ မကြာပါဘူး၊ကျမလဲ ရမက်စိတ်တွေ အရမ်းဝင် လာရပါတယ်။ နာတာကို အရေးမစိုက်နိုင်တော့ပါဘူး ဖင်ကြီးကို ကော့ပေး၊ ဘယ်ညာဝှေ့ယမ်းလုပ်ပေးပါတယ်။ ဇေယျာစိုးကလဲ ကျမနို့အုံကြီးတွေကို လှမ်းဆွဲလိုက် စောက်ပတ်ကိုထိုးနှိုက် ကလိလိုက်နဲ့ လီးကိုလည်း ကျမ ဖင် ပေါက်ထဲကို အားပြင်းပြင်းနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဘဲ ဆောင့်လိုး သွင်းနေပါတယ်။ ဖင်လိုးခံရမှုကြောင့် ကျမရဲ့ အဖုတ်ထဲက ယားလာပြီး နှစ်ချီဆက်တိုက်ပြီးသွားရပါတယ်။ ကျမ ဒုတိယအချီ အပြီးမှာ ဇေယျာစိုးလဲ ကျမဖင်ဆုံကြီးနောက်မှာ လှုပ်လှုပ် ခါခါနဲ့ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားပြီး ကျမ ဖင်ခေါင်းပေါက်ထဲကို ပူနွေးပျစ်ခဲတဲ့ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ တယ်ရှင် မြက်ခင်းပေါ်တွင် နှစ်ယောက်သား ဝမ်းလျှား မှောက်ရက်သား ဇေယျာစိုးနှင့် မဝင်းမေတို့သည် မှိန်း၍ နေကြသည်။ ဇေယျာစိုး၏ လီးကြီးကတော့ သူမ၏ စအိုထဲ မှ မချွတ်သေးဘဲ တန်းလန်းကြီးဖြစ်သည်။ ခဏကြာတော့ ဇေယျာစိုးက မဝင်းမေ၏ နားနားသို့ သူ၏ပါးစပ်ကို ကပ်၍ တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်။ ““မဝင်းမေ ကျနော့်တို့ဘေးက ခြုံစပ်မှာ ခင်မေ ရောက်နေတာကြာပြီ။ စောစောထဲက ကျနော်မြင်တယ်။ ကျ နော်နဲ့လက်တကမ်းဘဲ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”” မဝင်းမေက ချက်ခြင်း အဖြေမပေးသေးချေ။ သူမကို ပြောလိုက်သော ဇေယာျစိုးက ဘာကို ရည်ရွယ်သည် ဆိုတာကိုတော့ရိပ်မိလိုက်သည်။ ဒါ့အပြင် မဝင်းမေ၏ စိတ်ထဲ တွင်လဲ ညီအမနှစ်ယောက်အတူတူ အလိုးခံရရင်ကောင်း မည်ဟုစဉ်းစားမိလိုက်သည်။ ““ရှင် သူ့ကို လိုးချင်လို့လား”” ပါးချင်းကပ်၍ တိုးတိုးလေးပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ““အင်း ..”” ““ဒါဆိုရင် လှမ်းဆွဲလိုက် ကျမကိုလဲ သူနဲ့တူတူ လိုးပေးရအုံးမှာနော် ..”” ““အင်းပါ ..”” ပြောပြီးသည်နှင့် ဇေယျာစိုးက မဝင်းမေ၏ ကျော ပြင်ပေါ်တွင် တပ်ရက်သားဖြစ်နေရာမှ ဘေးသို့ ရုတ်တရက် ပက်လက်လှန်ချလိုက်ပြီး တဆက်တည်း သူ၏ ကိုယ်လုံးကို ဘေးမှခြုံဆီသို့ တပတ်လှိမ့်လိုက်ကာ ခင်မေ၏ လက်ကိုဆောင့် ဆွဲလိုက်သည်။ ““အမလေး . အင့် ..”” ခင်မေဝင်း ကိုယ်လုံးလေးက ဇေယျာစိုး၏ ကိုယ်ပေါ် သို့ မှောက်ရက်သားကျ၍လာသည်။ ဇေယျာစိုးက သူမကို ဖက်ပြီး တပတ်မျှ မဝင်းမေဘေးသို့ လှိမ့်လိုက်ရာ ခင်မေက ဇေယျာစိုး၏ အောက်ဖက် မဝင်းမေ၏ ဘေးတွင် ပက်လက် လှန်ရက်သားဖြစ်သွားသည်နှင့် သူမကိုလက်ဖြင့် ဖိ၍ ဇေယျာ စိုးက ကြုံး၍ထလိုက်လေသည်။
ဒီအချိန်မှာပင် မဝင်းမေကလဲ ကြုံး၍ ထကာ ခင် မေကို ချုပ်နှောင်ပေးလိုက်သည်။ ““မလုပ်ကြပါနဲ့ ဖယ်ကြပါ သနားပါအုံး”” အမှန်တော့ လည်ဂျာစာအုပ်ပြန်ယူပြီး သူမတို့ နောက်သို့လိုက်လာသော ခင်မေသည် ဇေယျာစိုးနှင့် မဝင်း မေတို့ရှိရာသို့ စောစောကထဲက ရောက်နေခဲ့သည်ဖြစ်သည်။ လယ်ဂျာစာအုပ်က မဝင်းမေ၏ စိုက်ခင်းရှိ အိမ်တွင် သွား၍ ယူရခြင်းဖြစ်သဖြင့် ခရီးလည်းကျွမ်းပြီး မြင်းစီးလဲ ကျွမ်းသော ခင်မေအဖို့ သိပ်ပြီး မကြာလိုက်ချေ။ ခင်မေတစ်ယောက် စမ်းချောင်းလေးနား ရောက် လာပြီး မဝင်းမေ၏ မြင်းကို တွေ့သည်နှင့် အသာဆင်း၍ ကြည့်ရာ ဇေယျာစိုးနှင့် မဝင်းမေတို့ နှစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်၍နေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ တခါ အလိုးခံထားခဲ့ဘူးပြီဖြစ်သော လီးအရသာကို သိနေပြီဖြစ်သော ခင်မေသည် ဇေယျာစိုးနှင့် မဝင်းမေတို့ လိုးကြတာကို ကြည့်ပြီး မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင်ပင် ကာမ စိတ်တွေကြွခဲ့ရသည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လဲ ခင်မေက မဝင်းမေတို့နှင့် အနီးဆုံး ခြံအကွယ်လေးဆီသို့ တိုးကပ်သွားပြီး အနီးကပ်ကာ အသေ အချာကြည့်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် မနေနိုင်လွန်းတော့သဖြင့် သူမ၏ စကပ်ကိုလှန် ပေါင်နှစ်လုံးကို ကားပြီး စောက်ခေင်းထဲသို့ လက်ညှိုး ထည့်၍ မဝင်းမေ အားရပါးရအလိုးခံနေသည်ကို ကြည့်ကာ လက်ညှိုးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထုတ်ချီ သွင်းချီ လုပ်ရုံမျှ မက မွှေ၍ပင်ပေးခဲ့ပြီး တစ်ချီပင်ပြီးခဲ့ရသည်။ သူမ၏ အမကို လိုးနေသော ဇေယျာစိုး၏ လီးကြီးကိုလဲ ပြေးဆွဲ၍ သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ထိုးထဲ့ ချင်စိတ်တွေက တချိန်လုံးပြင်းပြ၍နေခဲ့ရသည်။ အခု တကယ်လုပ်တော့မည်ဆိုတော့လဲ အမဖြစ် သူ၏ရှေ့တွင်ဖြစ်နေတော့ ခင်မေခမျာ ထိတ်လန့်၍ နေရသည်။ အမဖြစ်သူက သူမကို ချုပ်ပေးထားစဉ်မှာပင် ဇေယျာစိုးက ခင်မေ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားတွေ အား လုံးကို ချွတ်လိုက်ပေပြီ။ ““ဟာ ခင်မေ စောက်ပတ်ကြီးက မို့ပြီး ဖေါင်းကားနေတာဘဲနော် လိုးလို့ သိပ်ကောင်းမှာဘဲ”” တနှာသံဖြင့် မဝင်းမေက ရီဝေစွာပြောသည်။ ““ဟာ ကောင်းတာပေါ့ မဝင်းမေရာ အမ စောက် ဖုတ်က လိုးလို့ကောင်းသလို ညီမ စောက်ဖုတ်ကလဲ လိုးရတာ အရသာသိပ်ရှိတာဘဲ”” ““ဟင် .. ကိုစိုး လိုးဖူးလို့လား ”” မဝင်းမေက အံ့သြစွာပြောသည်။ ““လိုးဘူးတာပေါ့ .. ”” ““အို ”” ကနဲ ဖြစ်ကာ ခင်မေ တစ်ယောက် မျက်လုံးနှစ်လုံး စုံမှိတ်လိုက်သည်။ ““ဘယ်တုံးက လိုးလိုက်တာလဲ ကိုစိုးရ”” ““နေ့ခင်းကဘဲ သိပ်အရသာရှိတာဘဲ မဝင်းမေရာ”” ““ညီမလေး စောက်ဖုတ်ကို ကျမရက်ပေးမလို့ ကိုစိုးရ ..”” ““အေး .. ရက် ရက် ပြီးရင် မဝင်းမေကို လိုးပေးအုံးမယ် ..”” ““မ .. မ လုပ်ပါနဲ့ .. ဟင့် .. ဟင့် ..”” ဇေယျာစိုးနှင့် မဝင်းမေတို့ ရမက်ကြဖွယ်ရာ အပြန် အလှန်ပြောနေကြသည့်စကားသံများ အကြားတွင် ခင်မေ၏ တောင်းပန်သံလေးက ထွက်ပေါ်၍ လာသည်။
တွေ့ကြုံရတော့မည့် အဖြစ်ကို အလွန် ရှက်ကြောက် နေသော်လဲ မိမိ၏ စိတ်များ ပို၍ ထကြွကာ သောင်းကျန်း ၍ လာရသည်ကိုတော့ ခင်မေသည် သူမကို သူမ သတိ ထားမိသည်။ ရက်ပေးခြင်းမခံရမှီကပင် စောက်ဖုတ်သည် ဖေါင်း၍ တက်လာကာ အရည်ကြည်များထွက်ကျ၍ လာရသည်။ သည်လို စိတ်လှုပ်ရှား ရမက်ဇော ထန်လာရ သည့် မိမိ၏ကိုယ်ကို ခင်မေသည် လတ်တလော မုန်းတီး မိသည်။ ရမက်ဇောမထရလေအောင်လဲ အတင်း ချိုးနှိမ် ထားရသည်။ ဒါပေမဲ့ မရနိုင်ပါ..။ ဒီအချိန်မှာဘဲ .. ““ကဲ .. ညီမလေး .. ဘာမှ ရှက်ကြောက်မနေနဲ့ တော့ အားလုံး အကြောင်းသိတွေ ဖြစ်နေကြပြီဘဲ .. လာ မမက ညီမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ရက်ပေးမယ်နော် ..”” ပြောပြောဆိုဆို မဝင်းမေသည် ခင်မေကို သူမ၏ အနားသို့ ဆွဲခေါ်ကာ ပက်လက်လှန်စေလျှက် ဒူးခေါင်းနှစ်လုံးကို ထောင်စေလိုက်ရာ ခင်မေ၏ စောက်ဖုတ်ကြီး သည် ပြဲဟသွားလေတော့ရာ အတွင်း သားနီနီရဲများကို မဝင်းမေသည် မြင်တွေ့လိုက်ရတော့၏။ ထိုအခါမှ မဝင်းမေသည် ခင်မေ၏ စောက်ပတ်ကို သူမက လေးဘက်ထောက်လျှက် စတင်ရက်ပေးလေ တော့သည်။ ““ဟင်း .. ဟင်း.. ဟင်း .. မမ .. ဖြေးဖြေး.. အီး .. အား .. အိုး ..”” ခင်မေခမျာ စောက်ဖုတ် အရက်ခံရလေသော ကြောင့် သူမ၏ပါးစပ်မှ တအီးအီး တဟင်းဟင်းဖြင့် ညီးညူ နေရရှာလေသည်။ မဝင်းမေကလည်း အားရပါးရကို ရက်ပေး လေတော့ရာ မဝင်းမေသည် သူမကိုယ်ကို လေးဘက် ထောက်ကုန်းလျှက်ဖြစ်နေသည်ကို သတိမမူမိပေ။ ထိုအခါမှ ဇေယျာစိုးသည် မဝင်းမေက သူမ၏ ညီမ စောက်ဖုတ်ကို လေးဘက်ကုန်းလျှက် ရက်ပေးနေသဖြင့် မဝင်းမေ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးသည် နောက်သို့ ပြူးလျှက် ထွက်ပေါ်နေသည်ကိုကြည့်ရင်း စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ မဝင်းမေ၏ နောက်မှ နေရယူကာ သူ၏ လီးထိပ်ဖူးကြီးဖြင့် မဝင်းမေ၏ စောက်ဖုတ်ဝတွင်တေ့ကာ အသာလေးဖိသွင်းလိုက်လေတော့ရာ … ““ပြွတ် … စွပ် ..”” ဟူသော မြည်သံဖြင့် လီးထိပ် ဖူးကြီးသည် မဝင်းမေ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ဝင်သွားလေ တော့သည်။ ““အီး .. အား .. ကိုစိုး .. ဖြေးဖြေးနော် .. နောက်ပြီး ညီမလေးခင်မေကိုလည်း လိုးပေးရအုန်းမှာ နော် .. တော်ကြာ အရမ်းပင်ပမ်းနေအုန်းမယ် ..”” ““စိတ်ချပါ .. ကျနော် ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်ဘဲ လိုးပေးပါမယ်..”” ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် ဇေယျာစိုးသည် သူ၏ လီးတန် ကြီးကို မဝင်းမေ၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ တစ်ဆုံးတိုင် ထိုးသွင်း လိုက်လေတော့သည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ အချက် (၅၀)လောက် သွင်းထုတ်လုပ်ပေးလိုက်ရာ မကြာမီမှာပင် ဇေယျာစိုး၏ လီးတန် ကြီးသည် တင်းမာလာပြီး သုတ်ရေများ ပန်းထုတ်လိုက်ရ လေတော့သည်……ပြီးး။